လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ – ECD
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် Covid ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (Pandemic) ကာလအတွင်း လုပ်ဆောင်ဆဲ၊ လုပ်ဆောင်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP)၊ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း (IEE)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (EIA) အမျိုးအစား စီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန်ကြေညာခြင်း
Covid-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြရန် လိုအပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ အခြေပြုအချက်အလက်များ ကောက်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက် [embeddoc url=...
WED 2020 Quiz (Facebook live) မေး/ဖြေ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခြင်းနှင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအစီအစဉ်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ (၅) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ပိုစတာ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အစီအစဉ်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် WED 2020 Quiz (Facebook Live) ထုတ်လွှင့်ပြသခြင်းနှင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအစီအစဉ်အား “တို့ကမ္ဘာမြေရေရှည်တည်တံ့စေဖို့ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို အချိန်မီထိန်းသိမ်းကြစို့” ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
WED 2020 Quiz (Facebook Live) အစီအစဉ်တွင်
Facebook Page နှင့် Website မှ ကြေညာမည့်
Environmental Conservation Department (Test)
Test1 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် အသစ်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာနသည် အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်....
Opening Speech by the Excellency U Win Tun, Minister of the Ministry of Environmental Conservation and Forestry
First and foremost, I wish you all physical and mental wellbeing. I would like to ...
ပဉ္စမအကြိမ် အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး အစိမ်းရောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖိုရမ် ကျင်းပခြင်း
ပဉ္စမအကြိမ် အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး အစိမ်းရောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖိုရမ် ကျင်းပခြင်း အဓိကအချက်များ အကျဉ်းချုပ်(Summary Highlights) အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုမျာ...
MYANMAR FIRST NATIONAL CONSULTATION ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES and FAIR and EQUITABLE SHARING of BENEFITS (ABS)
The Consultation aims to 1) scope ABS-relevant policies on ABS in Myanmar; 2) draft road map towards developing national ABS legal framework; and 3) identify capacity needs of key.....